Ahoana ny fampiasana cookies sy teknolojia mitovy amin'izany | Avalances
Fampiasana Cookies sy Teknolojia Mitovy
Mampiasa cookies sy teknolojia mitovy amin'izany ny serivisinay, toy ny pixel sy ny fitehirizam-bokatra eo an-toerana mba hahatonga ny traikefa ho mora kokoa, haingana kokoa ary azo antoka kokoa. Ireto misy fomba sasany ampiasan'ny serivisinay ireo teknolojia ireo, toy ny tranokala, SMS, API, fampandrenesana mailaka, fampiharana, bokotra, widget ary dokam-barotra: sonia amin'ny Avalanca, vonjeo ny safidinao, ataovy manokana ny atiny, miaro amin'ny spam, ary ny fanorisorenana, ary mampiseho doka mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana anao.
Avy eo, hanazava ny fomba ampiasàn'ny Avalanches, ny mpiara-miombon'antoka aminay ary ny orinasan'ny antoko fahatelo ireo teknolojia ireo izahay, ary koa ny fikirakirana momba ny fiainana manokana sy ny endri-javatra hafa misy.
Ny dikan'ny Cookies, Pixels ary ny fitehirizana eo an-toerana
Cookies dia rakitra kely apetraky ny tranonkala amin'ny solo-sainanao rehefa mizaha tranonkala. Toy ny tranokala marobe, Avalanches dia mampiasa cookies mba hianarana ny fomba ampiasain'ny olona ny serivisinay sy hanatsarana ny zavatra niainany.
Ny pixel dia kaody kely amin'ny pejin-tranonkala na amin'ny fampandrenesana mailaka. Toy ny serivisy maro hafa, mampiasa piksel izahay raha te hifandray amin'ny atiny manokana amin'ny tranokala na mailaka ianao. Izany dia manampy anay hanombatombana sy hanatsara ny serivisinay ary hampahafantatra anao ny zavatra niainanao.
Ny fitehirizana eo an-toerana dia teknolojia mahazatra izay mamela tranokala na rindranasa hitahiry fampahalalana eo an-toerana amin'ny solo-sainanao na ny fitaovana findainao. Mampiasa tahiry eo an-toerana izahay hanamboarana izay asehonay anao, mifototra amin'ny fifandraisanay taloha tamin'ny serivisinay.
Fa maninona no ampiasaintsika ireo teknolojia ireo?
Ampiasainay ireo teknolojia ireo mba hanaterana, handrefesana ary hanatsarana ny serivisinay amin'ny fomba isan-karazany. Ireo teknolojia ireo dia matetika ampiasaina amin'ireto sokajin'asa manaraka ireto.
Fanamarinana ny maha-azo itokiana sy filaminana:
Midira amin'ny avalanca
Fiantohana ny filaminanao.
Mijery atiny misy fameperana fizarana.
Mamaritra sy manafoana ny spam, ompa, ary hetsika hafa manitsakitsaka ny fitsipiky ny vondrom-piarahamonina Avalanc.
Ohatra, ireo haitao ireo dia manampy amin'ny fanamarinana ny fidirana amin'ny Avalanca sy fisorohana ny fidirana tsy ara-dalàna amin'ny kaontinao. Avelany ihany koa izahay hampiseho aminao ny atiny mifandraika amin'ny zavatra mahaliana anao amin'ny serivisinay.
Tehirizo ny fampahalalana momba ny fitetezana anao sy ny safidinao.
Ohatra, mampiasa cookie izahay mba hahatsiarovanay ny fiteny tianao na ny firenena misy anao. Amin'izay dia afaka mampiseho atiny amin'ny fiteny tadiavinao izahay nefa tsy mila manontany anao isaky ny mitsidika ny Avalanca. Ao amin'ny Avalanches, azontsika atao ihany koa ny manamboatra atiny miankina amin'ny firenena, toy ny fampisehoana lohahevitra mifandraika amin'ny firenena na fanakanana ny fidirana amin'ny atiny sasany mifototra amin'ny lalàna eo an-toerana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny lohahevitra mifandraika sy atiny izay ferana ao amin'ny firenena iray manokana.
Analytics sy fikarohana:
Ny fahafantarana ny fomba ampiasain'ny olona ny serivisinay, ao anatin'izany ny bokotra sy widget an'i Avalanche hanatsarana azy ireo.
Ohatra, ny cookies dia manampy antsika hitsapa kinova isan-karazany amin'ny serivisinay hahafantarana izay fiasa na atiny izay tian'ny mpampiasa. Azontsika atao ihany koa ny manatsara sy manatsara ny Avalances amin'ny alàlan'ny fampiasana cookies hahafantatra ny fomba fifandraisanao amin'ny serivisinay, toy ny hoe oviana ary impiry ianao no mampiasa azy ireo ary iza no rohy tsindrioo. Fampahalalana fanampiny momba ny cookies izay mety sendra anao mifandraika amin'ny fampiasantsika ny Google Analytics. Azontsika atao koa ny mampiasa cookies mba hanisana ny isan'ny mpampiasa izay nijery bitsika na fahana manokana napetraka.
Ny fahaizana manamboatra ny serivisinay hanehoana atiny mifandraika kokoa, toy ny lohahevitra, tantara, doka ary tolo-kevitra mifandraika amin'izany.
Ohatra, ny fitehirizana eo an-toerana dia milaza aminay ny fizarana inona avy amin'ny fahana Avalanches efa hitanao mba hahafahanay mampiseho atiny vaovao aminao. Manampy anay ny Cookies hanoro hevitra marimarina kokoa ireo mpampiasa tianao hankafizinao ny famakiana mifototra amin'ny fitetezana tranokala anao.
Personalization amin'ny fitaovana samihafa:
Amin'ny alàlan'ny fahazoana angona misimisy kokoa momba ny fifandraisan'ny fitaovana, dia afaka mampiasa fampahalalana avy amin'ny fitaovana iray isika hanamboarana ireo Avalanca amin'ny fitaovana hafa.
Rehefa miditra amin'ny Avalanches amin'ny fitaovanao ianao dia ampifandraisinay amin'ny kaontinao Avalanches izany fitaovana izany. Na tafiditra ao amin'ny Avalanches ianao na tsia, mety mahazo fampahalalana momba ny fitaovanao amin'ireto tranga manaraka ireto ihany koa izahay (tsy feno ny lisitra): nisy mpiara-miasa iray nanome anay izany vaovao izany; niditra tamin'ny avalanches.com ianao; niditra tamin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ianao izay mampiasa atiny Avalancera tafiditra. Azontsika atao ny mampiasa an'io fampahalalana io (adiresy IP matetika sy ora fandraisana) hampifandraisina amina fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ireo izay nidiranao tao amin'ny Avalanches.
Aiza no ampiasaina ireo teknolojia ireo?
Izahay (miaraka amin'ny antoko fahatelo) dia mampiasa ireo haitao ireo amin'ny tranokalanay, amin'ny rindranasa sy serivisinay ary amin'ny tranokala hafa, amin'ny rindranasa sy serivisy hafa mifangaro miaraka amin'ny serivisinay (ao anatin'izany ireo tranokalan'ny antoko fahatelo izay mampiasa ny haitao fanaovana dokam-barotra). Ny antoko fahatelo dia mety mampiasa ireo teknolojia ireo koa, ohatra, rehefa manindry ny rohy amin'ny tranokalanay na ny rindranasa misy anao ianao, mijery na mifanerasera amin'ny atiny hafa amin'ny maha-ampahany amin'ny serivisinay, ary mitsidika tranokalan'ny antoko fahatelo izay mampiasa ny haitao fanaovana dokambarotra anay.